မိုးခေါင်တာ ငါ့နှလုံးသားမှာ ဒါပထမဆုံးပဲ
သေချာတာကတော့ ဒီတစ်မိုးမှာ နူးညံ့တဲ့အနမ်းတွေ အထွက်နည်းမယ်ဆိုပဲ
နံပါတ်နှစ်ကိုဆက်ရအောင်။ သူကတော့ ဂင်နာဂျီးရီး ဇျူဂန်နော့ဗ် ပါ။ ရုရှားနိုင်ငံ ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ ခေါင်းဆောင်ပါ။ အငြိမ်းစား ဗိုလ်မှူးကြီးတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၆-၆-၁၉၄၄ ဖွားပါ။ သူကတော့ ၆၈ နှစ်ရှိပါပြီ။ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတိုင်းမှာ ဒုတိယနေရာကလိုက်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။(ဒီနေရာမှာ ဒုတိယနေရာဆိုတာ မဲအရေအတွက်ကိုဆိုလိုပါတယ်။) သူကလည်း ဒဿနိကဒေါက်တာဘွဲ့ရထားပါတယ်။ သူ့မှာလည်း ရထားတဲ့ ဘွဲ့တွေက မနည်းပါဘူး။ (သူတို့သမ္မတလောင်းတွေကတော့ မပြောတော့ပါဘူး။ ဘွဲ့အရေအတွက်လိုက်ဖတ်တာတောင် မောတယ်))) သူ့မဲဆွယ်စာသားကတော့ ` အာဏာကို ပြည်သူ့ကိုပေးမယ်၊ သူ့ကိုရွေးပါ´ တဲ့...။
နံပါတ်သုံး- ဆရ်ဂေးရ် မီးရွန်းနော့ဗ်။ သူကတော့ တရားမျှတတဲ့ ရုရှား (တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်လိုက်ပါတယ်။ မြန်မာလို ဘယ်လိုပြန်ရမလဲ မသိတတ်တာနဲ့။ ) ဆိုတဲ့ ပါတီကိုယ်စားပြု ၀င်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာအရင်က united russia ပါတီဝင်ဟောင်းတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာလည်း ရခဲ့တဲ့ ဘွဲ့တွေက တသီတတန်းကြီးမို့ အထူးတလည်ရေးမပြတော့ပါဘူး။ အော်မေ့တော့မလို့ သူကတော့ ထူးခြားတယ်ပြောရမလား ၁၄-၂-၁၉၅၃ ဖွားပါ။ (ချစ်သူများနေ့မွေးတဲ့သူလေဟဲဟဲ)။ သူ့ရဲ့ မဲဆွယ်ဆောင်ပုဒ်ကတော့ `ဦးနှောက်နဲ့ စဉ်းစားပါ၊ နှလုံးသားနဲ့ ဆုံးဖြတ်ပါ၊ တရားမျှတမှုကို ရွေးချယ်ပါ´တဲ့။ (သူ့ပါတီက တရားမျှတတဲ့ ပါတီဆိုတာမေ့မသွားနဲ့နော်..။)
နံပါတ်လေးက ဘယ်သူပါလိမ့်.... ။ ဒီတစ်ယောက်ကတော့ တော်တော်ထူးခြားတယ်ပြောရပါမယ်။ ပထမတစ်ချက်က သမ္မတလောင်းတွေထဲမှာ သူက အငယ်ဆုံးပါ။ လက်ရှိသမ္မတထက် လပိုင်းပဲ ကြီးပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က သူက ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးလူတွေထဲမှာ နံပါတ်၃၉ ချိတ်တဲ့ ဘီလျံနာပါ။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ နိုင်ငံရေးလောကမှာ သူက ခြေသစ်လို့ပြောလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ၂၀၁၁ ဇွန်လမှာမှ နိုင်ငံရေးလောကထဲကို စ၀င်တာပါ။ နောက်တစ်ခုက သူက ဘယ်ပါတီကိုမှ ကိုယ်စားပြုပြီး ၀င်ပြိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ကိုယ်တော်ပါတဲ့။ ခုသမ္မတ၀င်ပြိုင်တော့လည်း သူက ဗလာဒီမီ ပူတင်ကို သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်လို့ ကြေညာစိန်ခေါ်ပြီး ၀င်ပြိုင်တာပါ။ ပြောရင်းပြောရင်းနဲ့ နာမည်တောင်မပြောရသေးဘူး။ မီဟိုင်းလ် ပရိုဟောရော့ဗ် ပါ။ သူကတော့ မေလ ၃ရက် ၁၉၆၅ ဖွားပါ။ ကျောင်းပြီးတော့ စီးပွားရေးပညာနဲ့ ပြီးပါတယ်။ သူ့မှာလည်းဘွဲ့တွေက တန်းစီနေတာမို့ မပြောတော့ပါဘူး။ သူ့ရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းကတော့ ဘဏ်လုပ်ငန်းပါ။ တခြားလုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိတာကိုတော့ မပြောတော့ပါဘူး။ ဘီလျံနာတစ်ယောက်မို့ ဖြည့်သာတွေးကြပါတော့။ သူ့ရဲ့ မဲဆွယ်စာသားကတော့ ` နိုင်ငံတော်သစ်နဲ့ သမ္မတအသစ်´ ပါတဲ့။
ရှေးတုန်းက တင်ရှားခဲ့တဲ့ ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုမှာ ဆိုထားတာကတော့ တစ်ခါက
လက်ဘနွန်နိုင်ငံရဲ့ လှပသာယာတဲ့ တောအုပ်လေးတစ်ခုမှာ ထင်းရှူးပင်လေးသုံးပင် ပေါက်လာခဲ့တယ်တဲ့။
ကြီးထွားနှုန်းနှေးလွန်းတာကြောင့် အဲဒီထင်းရှူးပင်လေးသုံးပင်ဟာ ရာစုနှစ်နဲ့ချီပြီး
`ရှင်သန်ခြင်းနဲ့ သေဆုံးခြင်း´၊ `သဘာဝနဲ့ လူသား´ အကြောင်းတွေကို တွေးတော ဖြတ်ကျော်လာခဲ့ကြတယ်။
ဆော်လမွန် ဘုရင်ကြီးရဲ့ စစ်သည်ရဲမက်တွေ လက်ဘနွန်နိုင်ငံကို ရောက်လာတာ၊ Assyrian
လူမျိုးတွေနဲ့ သွေးမြေလွှမ်းခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲတွေကို မြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ ပြီးတော့
ကမ္ဘာ့ရန်တွေဖြစ်တဲ့ ယေဇာဗလ် (Jezebel) နဲ့ ပရောဖတ် အီလိယာ (Elijah)
တို့ကိုလည်း တွေ့ဖူးခဲ့တယ်။ သူတို့ရှေ့မှောက်မှာပဲ အက္ခရာကို တီထွင်လာကြတယ်။
ကုန်သည်တွေကလည်း ရောင်စုံအထည်အလိပ်တွေတင်ပြီး သူတို့နားက ဖြတ်သန်းသွားကြတယ်။
ထင်ရှူးပင်လေးသုံးပင်ဟာ သူတို့ရဲ့အနာဂတ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးကြဖို့
ပြောတယ် ` သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေ အားလုံးနောက်မှာတော့ ငါ့မှာ
ဖြစ်ချင်တာ တစ်ခုပဲရှိတယ်။ အဲဒါကတော့ ရန်ခပ်သိမ်းကို အောင်နိုင်တဲ့ ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့
မေတ္တာနဲ့ စွန့်လွတ်အနစ်နာ ခံမှုအကြောင်း ခေတ်အဆက်ဆက် ဥပမာပြု ပြောဆိုသွားကြရမယ့်
အရာတစ်ခုခုရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်ချင်တယ်´ လို့ ဒုတိယတစ်ပင်က ပြောတယ်။
` လူတွေငါ့ကို ကြည့်တဲ့အခါတိုင်း ဘုရားသခင်ကို အောက်မေ့ကြတာမျိုး ဖြစ်ချင်တယ်´လို့
နှစ်တွေ ကုန်လွန်သွားလိုက်တာ နောက်ဆုံးမှာတော့ တောအုပ်လေးထဲကို သစ်ခုတ်သမားတွေ
ရောက်လာကြတယ်။ သစ်ခုတ်သမားတွေဟာ ထင်ရှူးပင်သုံးပင်လုံးကိုခုတ်ပြီး ခွဲစိတ်
ကိုယ်စီကိုယ်စီ စိတ်ကူးအိပ်မက်လေးတွေနဲ့ပေါ့။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့ဘ၀ကြီးဆိုတာက ငါတို့
ဘာတွေ ဖြစ်ချင်လဲဆိုတာ ဘယ်တုန်းကမှ မမေးဘူးလေ။
ထင်ရှူးပင်လေးကိုတော့ တင်းကုတ်လုပ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ နောက်ပြီး သူ့ဆီကပိုနေသေးတဲ့
ခပ်ကြမ်းကြမ်းစားပွဲတစ်လုံးလုပ်လိုက်တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ပရိဘောဂ ဆိုင်ကို
ရတဲ့သစ်ကိုတော့ ရောင်းမရတဲ့အတွက် ပျဉ်အဖြစ်စိပ်ပြီး မြို့ကြီးတစ်မြို့က
ခါးသီးစွာနဲ့ပဲ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ညည်းညူမိကြတယ် ` ငါတို့ဟာ သစ်မျိုးကောင်းတွေ
ဖြစ်ပေမယ့် ငါတို့ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အသုံးပြုဖို့တော့ ဘယ်သူမှ
အချိန်တွေကုန်လာလိုက်တာ တစ်နေ့၊ ကြယ်တာရာတွေ စုံတဲ့ ညတစ်ညမှာ နားခိုစရာမရတတ်တဲ့ ဇနီးမောင်နှံတစ်စုံဟာ
ပထမ ထင်းရှူးပင်လေးက ရတဲ့သစ်ကနေ ဆောက်ထားတဲ့ တင်းကုပ်လေးမှာ ညအိပ်နားဖို့
ရောက်လာကြတယ်။ မိန်းမဖြစ်သူက ကိုယ်ဝန် နေ့စေ့လစေ့ကြီးနဲ့ပေါ့။ အဲဒီညမှာပဲ
အဲဒီအမျိုးသမီးဟာ သားတစ်ယောက် ဖွားမြင်တယ်။ အဲဒီကလေးငယ်လေးကို စားခွက်လေးထဲက
ပထမ ထင်းရှူးပင်လေးဟာ သဘောပေါက်သွားတယ်။ သူ့ရဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေဟာ
တကယ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုတာကိုပေါ့။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးကျယ်ဆုံးသော အောင်နိုင်သူ လူသားရဲ့
အထောက်အပံ အဖြစ်ကို သူရလိုက်ပြီလို့ပေါ့။
နှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာ အိမ် ခပ်သေးသေးတစ်လုံးထဲမှာ လူအချို့ စားကြသောက်ကြတယ်။ ဒုတိယ
ထင်းရှူးပင်ကနေ လုပ်ထားတဲ့ စားပွဲမှာပေါ့။ အဲဒီလူတွေထဲက တစ်ယောက်က မစားသောက်ကြခင်မှာ
စားပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ ပေါင်မုန့်နဲ့ ၀ိုင် အချို့ကို နမူနာထားပြီး
ဒုတိယထင်းရှူးပင်ဟာလည်း သဘောပေါက်သွားတယ်။ သူဟာ ပေါင်မုန့်နဲ့ ၀ိုင်တင်တဲ့
စားပွဲသက်သက်မဟုတ်တော့ပဲ ၊ ဘုရားသခင်နဲ့ လူသားကြား ဆက်သွယ်မှုရဲ့ အထောက်အပံ့
တတိယထင်းရှူးပင်လေးက ရတဲ့ ပျဉ်တွေနဲ့ လက်ဝါးကပ်တိုင်လုပ်လိုက်ကြတယ်။
နောက်နာရီအနည်းငယ်အကြာမှာတော့ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ခေါ်လာကြပြီး
အဲဒီလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ သံတွေနဲ့ ရိုက်လိုက်ကြတယ်။ တတိယမြောက် ထင်းရှူးပင်လေးဟာ
စိတ်ပျက်ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ သူ့ရဲ့ အသုံးပြုခံနေရာအတွက် ကံကြမ္မာကို ကျိန်ဆိုမိတယ်။
သုံးရက်တောင် မလွန်ခင်မှာပဲ သူလည်းသဘောပေါက်သွားတယ်။ သူ့လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ
အချိတ်ခံရတဲ့ လူသားဟာ လောကရဲ့ အလင်းတန်ဆောင်ဖြစ်နေတာ။ သူ့ရဲ့ လက်ဝါးကပ်တိုင်ဟာ
နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းရာ လက်နက်အဖြစ်ကနေပြီး လွတ်မြောက်ရာ၊ အောင်မြင်ရာ
သင်္ကေတတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားခဲ့တာ၊ စတာတွေအားလုံးကိုပေါ့။
ကံကြမ္မာကတော့ အဲလိုအဆုံးသတ်သွားခဲ့တယ်။ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်
အမြဲဖြစ်နေကြအတိုင်းပဲ- သူတို့ရဲ့ အိပ်မက်တွေဟာ အကောင်အထည်ပေါ်လာခဲ့ကြတယ်၊ ဒါပေမယ့်
သူတို့မျှော်မှန်းထားခဲ့တဲ့ ပုံစံတွေနဲ့တော့ တခြားစီပေါ့….
notes; ဘာသာပြန်တွေ မရေးဖြစ်တာကြာပါပြီ။ ခရစ်စမတ်အကြောင်း ဖြစ်နေတာရော မူရင်းစာက အလွယ်တကူရှိနေတာကြောင့်ရော ပြန်ဖြစ်သွားတာပါ။ အမှတ်တရပေါ့။ အားလုံးအတွက် ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်လို့ ပြောလည်း ရပါတယ်။ Paulo Coelho ရဲ့စာအုပ်တွေကို The Alchemist ကနေစပြီး ဖတ်ဖူးခဲ့တာပါ။ အဲဒီကနေစပြီး ကြိုက်ခဲ့တာလို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါလေးကိုတော့ ခရစ်စမတ် အမှတ်တရအနေနဲ့ တင်ဖြစ်တာပါ။ သူကတော့ ဘာသာရေးနဲ့ဆက်နွှယ်ပြီးရေးထားတာ ဖြစ်ပေမယ့် ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျ လေးကို သဘောကျတာကြောင့် ဘာသာပြန်ဖြစ်သွားတာပါ။ The Alchemist မှာလည်းပဲ လူတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက် အိပ်မက်လေးတွေအကြောင်းပဲ ရေးထားတာပါ။ လူတွေအတွက် မျှော်လင့်ချက်ထက် အရေးကြီးတာရယ်လို့ရော ရှိမှမ၇ှိတာပဲလေ။ ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ အိပ်မက်တွေဟာ ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ တစ်နေ့မှာတော့ မုချဖြစ်လာမှာပဲမဟုတ်လား။ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်သလိုတော့ ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ။ ပျော်ရွှင်ဖွယ် ခရစ်စမတ်ပါ (ဝေလင်း)ိ
ဝေလင်း အစ်မအဖြူရောင်နတ်သမီးရဲ့မွေးနေ့အတွက် ရေးခဲ့တဲ့ကဗျာလေးပါ။။ အခုအမှတ်တရအဖြစ်တင်လိုက်ပါတယ်။ Posted by
လ တစ်လလုံး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ စာအုပ်ပုံထဲ
ခေါင်းထိုးတာပဲ။ ပြန်လာတော့လည်း သယ်လို့ရသမျှသယ်လာတဲ့ ထဲမှာ စားစရာသောက်စရာတွေက တ၀က်နဲ့
စာအုပ်က တ၀က်ပါ။ အမှန်တကယ်က စာအုပ်လေးတစ်အုပ်အကြောင်းပြောချင်လို့ပါ။ တစ်အုပ်လုံးအကြောင်းတောင်
မဟုတ်ပါဘူးလေ။ ပြောချင်တာလေးတွေရွေးပြောမှာပါ။ စာအုပ်က ဆရာမြသန်းတင့် ဘာသာပြန်တဲ့
Andre Maurois ရဲ့ The Art of Living ပါ။ ဆရာက ဘ၀နေနည်း အနုပညာ လို့ နာမည်ပေးထားပါတယ်။
အဲဒီထဲမှာ ခေါင်းစဉ်ခွဲ ၉ ခု ပါပါတယ်။ တော်တော်ကောင်းတဲ့ စာအုပ်လေးပါ။ ( အဲဒါတွေက အတည်ပါ။
အခုအပျက်တွေစပါတော့မယ်။ J ) အဟဲ ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကတော့
“လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း အနုပညာ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ပါ။ စာအုပ်ထဲမှာ ဘာရေးထားတယ်ဆိုတာထက်ကို
စာအုပ်ကိုဖတ်ပြီး တွေးမိတာလေးတွေ ပြောချင်လို့ပါ။ (စာအုပ်ထဲမှာ ပါတာတော့ စာအုပ်ပဲဝယ်ဖတ်ကြည့်တော့)
သူငယ်ချင်းမိန်းကလေးက (မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းနဲ့ သူငယ်ချင်းမိန်းကလေး ဘာကွာလဲတော့ မသိဘူး။
သေချာတာက အဲဒီတစ်ယောက်က သူငယ်ချင်း ပြီးတော့ မိန်းကလေး) သူက ပြောတယ်။ ယောက်ျားမယူချင်ဘူးတဲ့
(သေချာတာကတော့ တရားရသွားတာမဟုတ်ပါဘူး) တွေးကြည့်ရင်ကြောက်တယ်။ ပျင်းစရာကြီးတဲ့။ အဲဒီတစ်ယောက်တည်းနဲ့
တစ်သက်လုံးနေသွားရမှာတဲ့။ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းဆိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲတဲ့။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ငဲ့စရာမလိုဘူးတဲ့။
သူပြောတာပါ။ သူပြောတာတွေရေးပြနေလို့ ကျွန်တော်ကပါအဲလိုတွေးနေပြီလို့မထင်ပါနဲ့။ ကျွန်တော်ကတော့
မိန်းမယူဖြစ်အောင်ယူမှာပါ။ (အသက်အရွယ်ကြောင့်လည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်)
မိသားစုဘ၀တစ်ခုကို တည်ထောင်ကြည့်ချင်လို့ပါ။ ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်အဖေ ဘယ်သူလဲဆိုတာထက်
ကျွန်တော့်သား ဘယ်သူဖြစ်မယ်ဆိုတာက ပိုပြီး ကျွန်တော်ဘယ်သူဆိုတာကို ပြဌာန်းတယ်လို့ ခံယူပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မိဘတွေကို ကျွန်တော်တို့ ရွေးချယ်ခွင့်၊ ပြုပြင်ဖန်တီးခွင့်၊ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းမှ
မရှိတာ။ ကျွန်တော်တို့ တကယ်ဖန်တီး ပျိုးထောင်ယူရမှာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေပဲ
ရှိပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ကို သူဘယ်လောက်အောင်အောင်မြင်မြင်
ထူထောင်နိုင်လဲဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်က တိုင်းထွာချင်ပါတယ်။ မိသားစုဘ၀တစ်ခုကိုတောင် ကောင်းကောင်းမတည်ထောင်နိုင်ရင်
လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးနဲ့ ယဉ်ရင် ဘယ်လိုမှ လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။
ဒါတွေဟာ အသက်နှစ်ဆယ်ကျော်လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ရယ်ရွှင်ဖွယ်အတွေးတွေ ဖြစ်နိုင်သလို၊ အိမ်ထောင်ပြုဖို့
ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဆင်ခြေတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မောင်ဘချစ်ဝတ္ထုထဲမှာ ဆ၇ာမင်းသိင်္ခရေးထားတာလေးကို သဘောကျမိပါတယ်။ မိန်းမတွေဟာ သုညနဲ့တူတယ်တဲ့။
တချို့မိန်းမတွေကဆို သုည ၅ လုံးလောက်နဲ့ညီမျှတယ်ဆိုတယ်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ သုညနဲ့တူတဲ့မိန်းမကို
လက်ထပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် သူ့မှာ မူရင်းတန်ဖိုး ၁ ပဲရှိတယ်ဆိုင်ရင်တောင် ၁၀၊ ၁၀၀၊ ၁၀၀၀
စသဖြင့် တန်ဖိုးတက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကတ်သီးကပ်သတ်တွေးပြီး တချို့က ဆိုချင်ကြမယ်။ သုညတွေကို
နောက်မှာ မထားပဲ ရှေ့မှာထားရင်ရောဆိုပြီးတော့ ဒါဆိုလည်း ပူစရာမရှိသေးပါဘူး။ အရင်းက
အရင်းပဲမို့။ (ဒီနေရာမှာ သုညနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရခြင်းက မိန်းမတွေကို တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့
ဆိုလိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို မိန်းမတစ်ယောက်က ဘယ်လိုတန်ဖိုးမြင့်ပေးနိုင်တယ်လို့
မြင်သာအောင် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ မှတ်ယူစေချင်ပါတယ်။
စားအုပ်ထဲက ဟာလေးပြောချင်ပါတယ်။ Andre Maurois က ထိမ်းမြားခြင်းအနုပညာဆိုတဲ့ အခန်းမှာ
လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းကို ဆန့်ကျင်တဲ့ လူတွေရဲ့ အမြင်တွေ၊ အဲဒီလူတွေပြောခဲ့တာတွေကို
ဘာလဲ။ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်နဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်တို့ဟာ အသက်ငယ်ငယ်မှာ သူတို့ရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ဘ၀ကို အဆုံးသတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။
တစ်နည်းအားဖြင့် နောက်ထပ်စွန်းစားမှုအသစ်တွေ၊ ရင်ခုန်စရာအသစ်တွေကိုလည်း စွန့်လွတ်လိုက်ကြတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။
ချစ်သူချင်း ချိန်းတွေ့ပြီး ယစ်မူးရတဲ့ အရသာကလေးတွေကို စွန့်လွတ်လိုက်ရခြင်း ဖြစ်တယ်။
နောက်ထပ်ချစ်လို့ ခံစားရတဲ့ အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ သာယာကြည်နူးမှုလေးတွေကို စွန့်လွတ်လိုက်ရခြင်း
ဖြစ်တယ်။ သူတို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ အဓိကကျတဲ့ စွမ်းအင်တွေကို ဖြတ်တောက်လိုက်ရတာ ဖြစ်တယ်။
ဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ဘာမှရင်ခုန်မှုတွေမရှိတော့တဲ့ ဘ၀ကြီးထဲကို တစ်သက်လုံးဆင်းသက်သွားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။
ဒီလိုနဲ့ ဘ၀ကိုစတင်ဖို့ ပြင်ဆင်တုန်းမှာပဲ ဘ၀ဆုံးသွားရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ လင်ကိစ္စ၊ မယားကိစ္စထဲမှာ
နစ်မြုပ်သွားပြီး ငြီးငွေ့စရာကောင်းတဲ့ ဘ၀ကြီးထဲမှာ နစ်မွန်းသွားရတော့တယ်။ မျှော်လင့်ချက်တွေ
ကုန်ဆုံးသွားရတော့တယ်။ အောင်မြင်မှုတွေကုန်ဆုံးသွားရတော့တယ်။ အောင်မြင်မှုတွေ့ဖို့ အလားအလာတွေ
ပိတ်သွားရတော့တယ်။ အံ့ဩစရာတွေ ပျောက်ပျက်ကုန်ဆုံးသွားရတော့တယ်။ နည်းနည်းကြာလာတော့ အချစ်ဟာလည်း
ပျောက်ဆုံးသွားပြီး အိမ်မှုကိစ္စအတွက် လုံးပန်းရ၊ သားသမီးပညာရေးအတွက် စိုးရိမ်ရ ဖြစ်လာတယ်။
ဒီလိုနဲ့ လူငယ်ရဲ့ဘ၀၊ လူငယ်ရဲ့ ပျော်ရွှင်စရာတွေကို မခံစားလိုက်ရဘဲ၊ မသိမသာနဲ့ အိုမင်းရင့်ရော်သွားခဲ့ရတယ်။
လက်ထပ်လိုက်ရင်ပျော်စရာကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်အချစ်ကြောင့် လက်ထပ်ခဲ့ပေမယ့် လက်ထပ်လိုက်တာနဲ့
လက်ထပ်ချင်အောင် လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တဲ့ စိတ်ကူးယဉ်အချစ်ဟာလည်း ပြိုလဲပျက်စီးသွားတော့တယ်။”
စာပိုဒ်က စာအုပ်ထဲကပါ။ အဲဒီမှာပြောထားတဲ့ ထဲမှာ ကျွန်တော်က “အသက်ငယ်ငယ်” ဆိုတဲ့ စာလုံးကို
မျဉ်းသားပြထားပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ ယောက်ျား၊မိန်းမ ယူကုန်ကြရင်တော့ အဲဒီမှာရေးထားတဲ့
အတိုင်းပါပဲ။ စိတ်ပျက်စရာသိပ်ကောင်းပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်ပြန်သွားတော့ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့
ပြန်တွေ့တယ်။ ကိုယ်က ကျောင်းတောင်မပြီးသေးလို့ ကျောင်းသားစိတ်တောင် မပျောက်သေးတဲ့ အချိန်မှာ
တချို့ဆိုရင် သားကိုယ်စီ၊ သမီးကိုယ်စီနဲ့ ဖြစ်နေကြပြီ။ သူတို့ဘ၀နဲ့သူတို့ ပျော်ချင်လည်း
ပျော်ကောင်းပျော်လိမ့်မယ်။( သိပ်တော့မထင်ပါဘူး)။ ဒါပေမယ့် အားကျစရာမဟုတ်တာတော့ အသေအချာပဲ။
ထားပါတော့ အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ အိမ်ထောင်မပြုသင့်ဘူးဆိုတော့ ဘယ်အချိန်မှာ ပြုသင့်ပြီလဲ? အဲဒါကတော့
မပြောတတ်တော့ဘူး။ အသက်ငယ်ငယ်ဆိုတာက ဘယ်အရွယ်အထိကိုပြောတာလဲ? ဥပဒေအရတော့ ၁၈ နှစ်ဆို
အိမ်ထောင်ပြုခွင့်ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်ထောင်ပြုဖို့ကိုတော့ အသက်နဲ့တိုင်းတာလို့ကောရပါ့မလား?
ကျွန်တော့်အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်မှတ်တမ်းတင် ဗွီဒီယိုကြည့်မိတယ်။ အခမ်းအနားတွေကြည့်ပြီး
နည်းနည်းတောင် စိတ်ပျက်တယ်။ ကုန်သွားမယ့်ငွေတွေကို တွေးပြီး စိတ်တောင်ညစ်တယ်။ လာတဲ့ဧည့်သည်တွေထဲမှာ
သတုိ့သားသတို့သမီးနဲ့သိတာက တစ်ဝက်လောက်ပဲပါတယ်။ အဲဒီတစ်ဝက်ထည်းမှာမှ ရင်းနှီးတာက တစ်ဝက်လောက်။
စဉ်းစားတာကြည့်ပေတော့။ ရုရှားတွေ အခုနောက်ပိုင်းမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ ပုံစံကိုသဘောကျပါတယ်။
နှစ်ဖက်မိဘပါမယ်။ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ အရင်းတွေပါမယ်။ နောက်အရင်းနီးဆုံးဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပါမယ်။
(အဖေ့မိတ်ဆွေ၊ အမေ့မိတ်ဆွေတွေ မပါပါဘူး) ပြောရရင်တော့ ဒါအကုန်ပဲ။ ခန်းမရယ်လို့လည်းမငှားဘူး။
မနက်ပိုင်း ဒါမှမဟုတ် ညနေပိုင်း အဲဒီလူစုက ကားနဲ့ မြို့ထဲက နေရာစုံ လှပတဲ့နေရာတွေမှာ
ဓါတ်ပုံရိုက်၊ လျှောက်လည်၊ ပြီးရင် စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုခုမှာ( ကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်ထားတဲ့ဆိုင်)
ကျွေးမွေးပြီး ပြီးသွားတာပါပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီပုံစံကို သဘောကျပါတယ်။ ခမ်းခမ်းနားနားဆိုတာကို
ဘယ်လိုမှ ခံစားကြည့်လို့မရသေးပါဘူး။ လိုလည်းမလိုအပ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ( ဒါကိုကြားရင်တော့
မရှိသေးတဲ့ သတို့သမီးလောင်းက စိတ်ပျက်မှာအမှန်ပါပဲ)
အခမ်းအနားပေမယ့် လက်ထပ်ခြင်းဆိုတဲ့ မူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကိုတော့ မပျက်စေချင်ပါဘူး။
လူနှစ်ယောက်လက်တွဲပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို(အသေးလေးပေမယ့်) တည်ထောင်ကြည့်ခြင်းပါ
ဒီပို့စ်အပြီးမှာ စိတ်ဝင်စားသူ အမျိုးကောင်းသမီးများ ဖုန်းဆက်လို့ရပါတယ်။ ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ +7931299**** ပါ နောက်ကလေးလုံးကိုတော့ ဖူးစာရှင်မှန်ရင်မှန်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်)))))))))
တစ်နေ့တစ်လံနဲ့ ပုဂံက ဘယ်မှမရွေ့ဘူး အဲလိုပဲ ကိုယ်ကလည်း ဘယ်မှမရွေ့ဘူး
တကယ်တော့ အပင်နဲ့ ဘယ်လောက်ဝေးဝေး ပန်းကတော့ မွှေးမှာပဲ
ပြီးတော့ နင့်ကိုလွမ်းတဲ့ အလွမ်းတွေနဲ့ ရွှဲရွှဲစိုနေတဲ့ နှလုံးသားလည်းရှိတယ်
ငါချစ်ရတဲ့ သင်္ကြန်ပေါ့... notes; အစ်မချစ်ကြည်နဲ့ အစ်မအဖြူရောင်ရေ....။ ကသုတ်ကယက်ထပြီး ပုဆိုးစုတ်လေးနဲ့ ဖုန်ခါလိုက်ပါပြီ။ပြီးတော့ ဘလော့အ၀င် တံခါးဝမှာ ရေပုံးကို ကြိုးနဲ့ ချိတ်ထားခဲ့ တာမို့ ခုချိန်လောက်ဆို ကဗျာ ဖတ်ပြီးတဲ့ သူတိုင်း ရေရွှဲနေလောက်ပြီ.. ဟီးးးးး
- သိပ်မကြာခင်မှာပဲ နေ၀င်တော့မှာမို့နဲ့ တူပါရဲ့ ကောင်းကင်ကြီးက နှုတ်ဆက်နေလိုက်တာ တိမ်လေးတွေတောင် လောင်ကျွမ်းတောက်ပလို့ မကြာခင် ခွဲခွာရတော့မှာ ၀မ်းနည်းနေသလား... ဒါမှမဟုတ် လေလေးတစ်ချက်နှစ်ချက် အဝှေ့မှာ ထထခုန်ကြတဲ့ သစ်ရွက်ကြွေလေးတွေရဲ့ ဘ၀ကိုပဲ မရှုရက်လေသလား.. သူတို့ဘယ်လိုများ ဖြေသိမ့်ကြပါသလဲ...။- သစ်ရွက်ကြွေလေးတွေဆီနည်းနည်း၊ အဖျားဝါပြီး ငိုက်စိုက်ကျနေတဲ့ မြက်ပင်လေးတွေဆီနည်းနည်း၊ နွေရာသီကနေထွက်ပြေးလာတဲ့ လေပြေလေးတွေဆီ နည်းနည်း၊ မကြာခင်ပျောက်ကွယ်တော့မယ့် နေ၀န်းလေးဆီ နည်းနည်း ခံစားချက်လေးတွေ မျှပေးမိတာ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးတောင်လေးလံလို့..။- နွေရာသီကုန်ဆုံးသွားပြီ..။- ဆောင်းအိပ်မက်တွေဟာ နွေရာသီမှာလည်း မက်တတ်တယ်ဆိုတာ နွေရာသီကုန်ဆုံးချိန်အိပ်မက်က လန့်နိုးမှ သိလိုက်ရတဲ့အခါ ပြန်မရနိုင်တော့မှန်း သိတဲ့အသိတွေနဲ့အတူ နှမျှောတသ ဆုံးရှုံးခြင်းကို ခံစားလိုက်ရတယ်။ - တဖြည်းဖြည်းမှောင်လာလိုက်တာ ပတ်ဝန်းကျင်ကလား စိတ်ကလားတောင် မဝေခွဲနိုင်တဲ့ အဖြစ်မျိုး ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါ သေချာနေတဲ့ သံသယတွေကိုတောင်မှ သံသယလေးဝင်ပြီး အကောင်းဆုံးကို မျှော်လင့်နေမိသေးတာဟာ ရူးသွပ်မှုဆိုရင်တောင် ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်မတင်ရက်ဘူး..။- နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုထိတွေ့မှု၊ ၀င်သက်ထွက်သက်အပေးအယူမျှမှု.. ဘယ်တုန်းကမှ တို့အနမ်းတွေ အဲလောက် မရှည်လျားခဲ့ဖူးဘူး။ အခုတော့ နေရောင်အောက်က ရေခဲတုံးတစ်တုံးလို တဖြည်းဖြည်း ပါးလျပျောက်ကွယ်သွားသလိုမျိုး တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဆုံးရှုံးရင်းနမ်းခဲ့ကြတာ `နောက်ဆုံး´ဆိုတဲ့ အသိနဲ့တဲ့လား။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ခပ်တင်းတင်း ပွေးဖက်ထားခဲ့ကြတဲ့ လက်တွေဟာ ထာဝရ လက်မလွတ်လိုက်ရခင် နောက်ဆုံးအင်အားတဲ့လား...။- အနမ်း။ ပါးပြင်၊ အပေါ်နှုတ်ခမ်း၊ အောက်နှုတ်ခမ်း၊ နားရွက်ကလေးတွေ နောက်ပြီးတော့ လည်တိုင် အားလုံးကို ဆုံးရှုံးမှုနဲ့ မွတ်သိပ်စွာနမ်းခဲ့တာ။ အဲဒီအနမ်းဟာ နှုတ်ဆက်အနမ်းမဟုတ်ပေမယ့် သေချာနေပြီဖြစ်တဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ နောက်ဆုံးအနမ်းပါ။- အနမ်းတွေဟာ ဘယ်တော့မှ လေထဲပျောက်ကွယ်မသွားဘူး...။- တိမ်အတုတွေကြောင့် နှလုံးသားနှစ်ခု ဖျားနာသွားတာဟာ ဘယ်သူ့အပြစ်ကြောင့်လဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို မေးဖို့ အဖြေကို နားထောင်နိုင်စွမ်းမရှိတာနဲ့ပဲ သက်ပြင်းသုံးကြိမ်ချခဲ့မိတယ်..။- ရှုံးနိမ့်ခြင်းနဲ့ ဆုံးရှုံးခြင်းဟာ သနပ်ခါးလိမ်း ပန်းပန်ပြီး ဇာတ်စင်ရှေ့ထွက်လာတဲ့အခါ ကံတရားဆိုတဲ့ ဇာတ်ဆရာက ကန့်လန့်ကာ ထောင့်ကွယ်ကနေ ပြုံးပြီးကြည့်တယ်။- လေထုထဲမှာ ရနံ့တွေ ပါလာတတ်လွန်းလို့ အသက်ရှူဖို့တောင် ကြောက်လန့်မိ။ ခြောက်သွေ့တဲ့လေထုကို ရှူရှိုက်မိတိုင်း အနမ်းတွေနဲ့ စိုစွတ်နေတဲ့ လေထုကို လွမ်းမိတယ်။- ပိုင်ဆိုင်ခွင့် မရှိတော့တဲ့ အနမ်းကို အခါအခွင့်ကြုံတိုင်း လွမ်းဆွတ်မိတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှိပ်စက်ရာများ ကျလေမလား..?- အနမ်းနှစ်ခုကြား အများကြီးခြားနားသွားတာကို မနမ်းခင်အခိုက်အတန့်နဲ့ နမ်းပြီးအခိုက်အတန့် နှလုံးသာကို ယှဉ်ကြည့်တော့ သိပ်သိသာလာတာဟာ မနမ်းခင်ရှင်သန်နေခဲ့တဲ့ နှလုံးသားဟာ နမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာ သေဆုံးသွားတာကို တွေ့မြင်ရလို့ဖြစ်တယ်။- နွေးထွေးတယ်၊ စိုစွတ်တယ်၊ နူးညံ့တယ်၊ တလပ်လပ်နဲ့ ရင်ထဲက ဖိုတယ်၊ ချိုမြိန်တယ်၊ နှလုံးခုန်မြန်လာတယ်။ ဟိုးအတွင်းထဲ.. အတွင်းထဲအထိ....- နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုရဲ့ ထိတွေ့မှုအောက်မှာ အတ္တတွေပြိုကျ၊ သူလည်းမရှိငါလည်းမရှိ ဖြစ်တည်မှုအသစ်၊ သူမဟာ ငါ့ရဲ့ ဒုတိယတစ်ဝက်ဖြစ်တယ် လို့ ......။- ဒီစာမှာ အနမ်းကလွဲပြီး ဘာမှမပါဘူး..။
မြတ်နိုးဖွယ်မဟာ ဂရုဏာတော်ပါပဲကွယ်....။ (ဝေလင်း)
Wai LinnСоздайте свою визитку
Art by wailinn is licensed underaCreative Commons Attribution 3.0 Unported License.Based onawork at homeofns.blogspot.com.
မမေထားထားဦး(စင်္ကာပူ)၏ အရုဏ်ဆွမ်းအလှူနှင့် လစဉ်ဆွမ်းအလှူရှင်များ ၏ နေ့ဆွမ်းအလှူ ၁၈.၆.၂၀၁၃
Discount Dolce Gabbana Perfume
အတော်ခွကျသော ယောက်ျားနှင့်လက်ျာ ဆိုသော စကားလုံးများ
မြန်မာအစိုးရနဲ့ နိုင်ငံရေးစကားမှ ပါဠိ သက္ကတသက် ဝေါဟာရများ ဒေါက်တာလှဘေ (ရေး) / မော်သာနိုး (မြန်မာပြန်)
ညီမလေးများ အတွက် မပျက်မကွက် မွေးနေ့ဆုတောင်း
ပရဟိတ စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်း အလှူရှင်လိုအပ်နေ
Diabolic Diary ကို ဆက်မရေးတော့ပါ
ပိတ်မရ ရွေ့မရတဲ့ Trojan.Winlock
Something is wrong whenlove is true."Heartily know,when half-gods go,the gods arrive."When the first love touchYou beaPoet.
ဥယျာဉ်မှူးရာသီသုံးခုလုံးပြုစုယုယခဲ့သူလေဒီမနက်မှာတော့ကျွန်တော့်နှလုံးသားကိုခုတ်ပိုင်းပြီးသူတို့..အဝေးကို ထွက်ခွာသွားကြပေါ့။ ။မောင်ခင်လေး
"၀င်ပေါက်ဟာလည်း ထွက်ပေါက် ၊ စိတ်ချလက်ချ တံခါးမထားရှိ"
၂၁ ရက်နေ့ တစ်ရက်၏ နေ့ရေးအကျဉ်း တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါသည် ၊၊